Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) Review - Best MobileGo for Android Review
Magburu onwe site Zoe
Amamiihe site Martin
Anyị nwere 2 Samsung Android smart igwe. A 4.1 na a 2.1. Samsung Kies3 agaghị ịgwa ndị 2.1 ma MobileGo uche. Thankyou, m na jisiri ndabere 2.1 ke akpatre. MobileGo na-enye ohere m aka ịhụ Ext-SD kwa. Nnọọ ọrụ enyi na enyi kwa, mma otu MobileGo
Jụụ App site Jamie
Nke a software bụ ihe m na-achọ! N'ezie oké na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè! M ga-akwado nke a ngwa ka onye ọ bụla.
ỌMA site Italo Bucchieri
Dị nnọọ mma mgbake faịlụ na PHON
Amzing site Vinayak Sharma
Na-eji AFT tupu thgis IDK mere, nke a bụ nnọọ ịtụnanya
Ịtụnanya App !!!!!! site Vinayak Sharma
A na ngwa bụ ịtụnanya, m na-eji AFT befoe a n'ihi na m bụ nzuzu, mgbe achọta nke a, mgbe m na-eji nke a ngwa trandfer media n'etiti ekwentị na m Mac. nnọọ ịtụnanya
Broken ihuenyo Samsung Galaxy I9000 - Natara Ndi ana-akpo n'udo - Awesome site Sandeep
A n'anya ngwa, Mgbe agbalị ihe niile rutere na a njikọ nke ahụ e kwuru a na ngwa: , Arụnyere na dị ka ala na m MacBook, na hey m nwetara m kọntaktsị na dị ka 2 clicks. ekele ụmụ okorobịa n'ihi na nke a dị egwu ngwa.
MobileGo N'ihi na Mac site Truong
Wondershare Si MobileGo for Android awade fọrọ nke nta niile na atụmatụ dị na iTunes-na ole na ole ị gaghị ahụ n'ebe ọ bụla Apple si software. Ya mere gam akporo ọrụ, ị nwere ike imagide gị anyaụfụ nke symbiotic mmekọrịta dị n'etiti Apple si mobile iOS ngwaọrụ na ya iTunes desktọọpụ software. MobileGo dị na a free version na nke ahụ bụ maka Windows PC na a $ 40 Pro version na nke ahụ bụ maka Macs, kwa. MobileGo for Android MobileGo Pro atụmatụ a panel na-egosiputa nkọwa banyere gị gam akporo ngwaọrụ, mgbe center akụkụ nke ihuenyo na-enye gị a n'ozuzu nnyocha. The free version nke MobileGo awade isi Android management atụmatụ, gụnyere ike iji ndabere gị na ekwentị ọdịnaya (gụnyere SMS ozi, ngwa, na kọntaktị) na-enye gị ohere nyefee na kọntaktị na multimedia faịlụ n'etiti ekwentị gị na PC. Ọ na-enye gị ohere iji jikwaa ngwa ọdịnala na zipu ma zaghachi ozi ederede site na kọmputa. The Pro version agbakwụnye ọzọ bara uru atụmatụ, gụnyere ike iji tọghata ọdịyo na video faịlụ ka a dakọtara format tupu ebufe ya na ekwentị gị, ikike mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ iji Android, na ikike mbubata na mbupụ kọntaktị na site na Outlook na Windows Mail. Ọ bụ naanị nzukọ na ị ga-akwụ $ 40 iji nweta atụmatụ ndị a, mgbe iTunes bụ free, ezie N'eziokwu ọ na-adịghị na-enye ihe a nile arụmọrụ. Ọ bụrụ na i nwere ike inwe n'oge gara aga na price mkpado, ị ga-ahụ MobileGo Pro maka Android bụ ihe mara mma, mfe na-eji ngwa. MobileGo Pro si interface e redesigned na version 2; M hụrụ tupu nsụgharị dị nnọọ ka mfe na anya, ma ọhụrụ anya ejisie eme ka ndị niile nke ngwa atụmatụ inweta n'ime a click ma ọ bụ abụọ. Ka malitere, ị wụnye software na kọmputa gị na jikọọ na gị android ngwaọrụ. Ị nwere ike ijikọ ya site na USB ma ọ bụ, dị ọhụrụ version 2, site WiFi. Ịnwere ike ịmepụta WiFi njikọ site mmeghe ndị MobileGo ngwa na ekwentị gị (ọ installs na-akpaghị aka mgbe ị na jikọọ ekwentị gị na MobileGo) ma ọ bụ site ịgụ isiokwu a QR koodu na ngwa ngosipụta na gị na ihuenyo. MobileGo ghọtara m Motorola Droid Bionic ozugbo, na n'ime sekọnd egosipụta otu nnyocha nke dị n'ime ya. A panel na n'aka ekpe nke MobileGo si interface depụtara ọnụ ọgụgụ nke songs, videos, photos, kọntaktị, SMS ozi, na ngwa ọdịnala na ngwaọrụ ahụ; na ịpị ọ bụla nke a na edemede emepe a ọzọ zuru ezu window na isi akụkụ nke MobileGo ihuenyo. -Amasị m otú mfe ọ bụ na-agụ SMS mkparịta ụka na ịhụ kọntaktị site ìgwè-ijikwa ihe ndị a bụ nnọọ mfe mere na a nnukwu PC ihuenyo kama a dịtụ obere ekwentị mgbe ụfọdụ. Site MobileGo si homescreen, ọ dị mfe iji nweta ọtụtụ n'ime ngwa si ndị ọzọ. Na dị nnọọ abụọ clicks m bụ enwe ike ike a zuru ezu ndabere nke ekwentị m, na atọ clicks, m dị njikere mbubata ihe iTunes playlist. Nyefee video ekwentị m e a ikuku, kwa, dị ka m bụ ike iji tọghata ma nyefee a 30-nkeji telivishọn show n'elu ka ekwentị m na nkeji. MobileGo Pro maka Android awade ihe dị mfe na mma ngwọta maka ijikwa Android ngwaọrụ. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na Pro version ndị a bit dị ọnụ ala karịa, ma ị na-eme na-a zuru-apụta ngwa n'ihi na gị ego.
Ezigbo anya! Site Elias Eldabbagh
M didn \_ 't eche na ọ bụ na o kwere omume ka mmekọrịta m Android, Nexus 5 na m Mac - m n'ezie Agbaghara m iPhone ruo mgbe m chọtara MobileGo for Android Pro. A na-agbanwe ihe niile banyere mmekọrịta na nkwado ndabere ruo mgbe ebighị ebi. Na-ekele unu maka oké software. Couldn \_ 't ịjụ maka ihe ọ bụla mma!
Iji Trial ma ịzụ ihe Pro! Site Yolanda Nelson
Nke a bụ ihe kasị mma Android ka MAC App na mbara ala! M na dị nnọọ ụbọchị 1 nke m 15 ụbọchị ikpe ma m na-achọ m obere akpa m ka m pịnye! Ọ kpaliri m music na-enweghị glitches ka m anya na faịlụ na ekwentị m mfe. M ga-akwado nke a ngwa ka onye ọ bụla, m ga--tweeting na Facebooking a na ngwa niile nke enyi m, ezinụlọ na ahịa.